ननस्टप विशेष Archives - Page 28 of 38 - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
८ भाद्र २०७४, बिहीबार २२:०० August 24, 2017 Nonstop Khabar
नेपाल पत्रकार महासंघले गत साउन ६ देखि ८ गतेसम्म दुईवटा मिसन सञ्चालन ग¥यो । राजनीतिक, क्षेत्रीय र जातीय मुद्दामा पटक पटक आन्दोलन हुँदा सबैभन्दा ठूलो जोखिम र सुरक्षा चुनौती पत्रकारहरुले नै सामना गर्दै आएको स्थितिमा त्यसलाई कम गर्न महासंघले थुप्रै अभियानहरु सञ्चालन गरेको छ । आन्दोलनहरु उत्कर्षमा रहेका बेला होस् वा आन्दोलनपश्चात् महासंघले पत्रकारहरुको अवस्थाका […]
धनगढीमा पनि ‘६ लेन’को सडक निर्माण सुरु
८ भाद्र २०७४, बिहीबार ०६:५९ August 24, 2017 Nonstop Khabar
धनगढी, ७ भदौ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहनापुलदेखि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया चोकसम्मको सडकलाई ‘छ लेन‘को बनाई स्तरोन्नती गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । मोहनापुल—अत्तरिया सडक आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले हाल प्रारम्भिकचरणमा उक्त सडक दायाँबायाँ ड्रेन(नाली) खन्ने कार्य सुरु भइसकेकाले सो स्थानमा पर्ने रुखको कटानी गर्ने, विद्युत् र फोनका खम्बा सार्ने लगायतका अन्य कामको प्रक्रिया अघि बढाइएको […]
बाढीपछि सप्तरीमा सर्पको बिगबिगी
८ भाद्र २०७४, बिहीबार ०६:३२ August 24, 2017 Nonstop Khabar
राजविराज, ७ भदौ । सप्तरीमा हालै वर्षासँगै आएको बाढीका कारण जिल्लाका विभिन्न भागमा बाढी पसेपछि अहिले सर्पको बिगबिगी बढेको छ । पछिल्लो पटक सप्तरीको विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा सयौँ व्यक्तिलाई सर्पले टोकेको बताइएको छ । खोलानाला र नदीमा पानी पसेपछि आफ्नो बासस्थान गुमाएर बगेर आएका सर्पको बिगबिगी बढेको जिल्लावासीको भनाइ छ । खासगरी बाढी प्रभावित […]
प्रधानमन्त्री देउवा पुगे मोदी महल, विमलेन्द्रले पाए बक्सिस्
७ भाद्र २०७४, बुधबार २२:२७ August 24, 2017 Sanjeep Ghimire
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी पूर्व महामन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिलाई दिएका छन् । पार्टीका पदाधिकारी र प्रभावशाली नेताहरुलाई पछि पार्दै निधि कार्यबाहक सभापति भएका हुन् । उनी देउवाका विश्वासपात्र मानिन्छन् । देउवाकाे भारत भ्रमणका सुत्रधार बिमलेन्द्र बनेपछि उनलाई कावा सभापति बक्सिसमा मिलेको काँग्रेस स्रोतले बतायो । काँग्रेसमा बिमलेन्द्रको प्रभाव हेर्न […]
नयाँ शक्ति भ्रम भएको भन्दै फर्कियो पौडेलको टोली, ३ बजे पार्टी प्रवेश तय
६ भाद्र २०७४, मंगलवार ११:३२ August 23, 2017 Sanjeep Ghimire
काठमाडाैं । माओबादी केन्द्रलाई पुरानो मक्किएको घर भन्दै नयाँ घर बनाउन निस्केका देवेन्द्र पौडेलको टीम पुरानै घरमा फर्कने टुंगो लागेको छ । मंगलवार दिउसो एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच उनीसहित सयौको संख्यामा पुराना माओबादी नेता कार्यकर्ता माओबादी केन्द्रमा फर्कने भएका हुन् । बाबुराम भट्टराइको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति बनाउने भन्दै निस्केका प्रभावशाली नेता पाैडेल लगायतको टोली बाबुरामले […]
सरकारद्वारा निर्वाचन मिति सार्वजनिक
५ भाद्र २०७४, सोमबार १५:४३ August 23, 2017 Sanjeep Ghimire
काठमाडाैं । सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकै दिन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकै दिन मंसिर १० गते गर्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ताले बताए । निर्वाचन आयोगले तयारी पुरा गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै […]
भुकम्प पीडित भएर पनि लाभग्राहीको सूचीमा पर्नुभएको छैन ? मसान्तसम्म तपाईलाई माैका
३ भाद्र २०७४, शनिबार १३:३९ August 20, 2017 Sanjeep Ghimire
काठमाडाैं । के तपाई भुकम्प पीडित भएर पनि लाभग्राहीको सूचीमा पर्नुभएको छैन ? यदि यसो हो भने तपाईले चिन्ता मान्नु पर्दैन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले विभिन्न कारणले सर्वेक्षणमा छुट भएर लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका भूकम्प पीडितकोलागि पुनः सर्वेक्षणका ब्यबस्था मिलाएको छ । भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा प्राधिकरणले इन्जिनियरलाई पुनः खटाएको छ । ती जिल्लामा ३३२ […]
ननस्टपकर्मी संजीप घिमिरे पुरस्कृत
२ भाद्र २०७४, शुक्रबार २१:४५ August 20, 2017 Sanjeep Ghimire
काठमाडाैं, २ भदाैं । ननस्टपखबर डट कमका सम्पादक संजीप घिमिरे पत्रकारिताको माध्यमबाट देशको शैक्षिक बिकाशमा योगदान गरेवापत पुरस्कृत भएका छन् । शिक्षाको क्षेत्रमा संजीप शुभचिन्तककाे नामबाट कलम चलाउदै आएका घिमिरे ‘शिक्षा पत्रकारिता लेखनवृत्ति-२०७३’ बाट पुरस्कृत भएका हुन् । नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय , शिक्षा बिभाग र पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले घिमिरेलाई ‘शिक्षा पत्रकारिता […]
बढ्यो दूधको मूूल्य
२ भाद्र २०७४, शुक्रबार ०८:२६ August 19, 2017 Sanjeep Ghimire
काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दूधको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । (डीडीसी) ले एक लिटर दूधमा ६ रुपियाँ वृद्धि गरेको हो । यसअघि एक प्याकेट (आधा लिटर) दूधको ३३ रुपियाँ तिर्दै आएका उपभोक्ताले अब एक प्याकेट (आधा लिटर) दूधको खुद्रा मूल्य ३६ रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । डीडीसीले निर्धारण गरेको नयाँ मूल्य […]